Chrome haicharatidze zviratidzo zvemawebhusaiti akachengeteka | Linux Vakapindwa muropa
Google yakazivisa izvozvo iri kuyedza basa nyowani mu Chrome 93 beta umo a haizoratidze yakachengeteka webhusaiti mamaki. Izvi zvinodaro nekuti muchikamu nekuti Google ndiyo inonyanya kushandiswa mubhurawuza pasirese, anotendawo kuti izvi zvinofanirwa kukurudzira vanogadzira kuti vashandise HTTPS chete pamasaiti avo. Shanduko iyi inouyawo mwedzi mishoma mushure mekunge Google yazivisa kuti Chrome kero bar inotanga kushandisa "https: //" nekutadza.
Google yanga ichiita kuyedza kwakabatana kwemakore akati wandei kuwana mawebhusaiti ekushandisa chete HTTPS protocol kupa ruzivo rwakachengeteka rwekubhurawuza. Uye kukurudzira vashanduri vewebhu kuti vashandise chete iyo HTTPS protocol iyo yakaunza iyi protocol sechinhu chakatarwa muSERP (yekutsvaga injini peji peji). Izvi zvinoreva kuti vagadziri vasingagone saiti yakachengetedzeka vakasangana nedonho rinogona kunge riri diki muzvikamu zvavo mumigumisiro yekutsvaga kweGoogle.
Nekutaurirana kwakawanda pakati pemawebhusaiti izvozvi zvakachengeteka, Google parizvino iri kuyedza ficha nyowani iyo inobvisa kiyi yekuvharira yenzvimbo dzakachengeteka.
Sezvo isu tichisvika mune ramangwana reHTTPS, tiri kuongorora zvakare iyo yekuvharika icon iyo mabhurawuza anowanzo kuratidza kana saiti inotakura pamusoro peHTTPS. Kunyanya, kutsvagurudza kwedu kunoratidza kuti vashandisi vanowanzo batanidza ikoni iyi nenzvimbo inovimbwa, nepo iko chete kubatana kuri kwakachengeteka. Mune ongororo ichangoburwa, takaona kuti chete 11% yevatori vechikamu vanogona kunyatsoziva zvinorehwa nekiyi icon.
Basa iri iri kuyedza muChannel 93 Beta uye Chrome 94 Canary, umo Chrome zvinongoratidzira chete zviratidzo zvekuchengetedza kana saiti yacho isina kuchengetedzeka. Kutanga ne Chrome 93, kambani inoronga kushandura iyo yekuvharira icon nemuseve wezasi sechikamu chekuyedza.
Zvisinei, Google yakapa sarudzo yekutendera makambani kuti agone zvakare mureza weHTTPS wekuchengetedza. Uye zvakare, Google yakawedzera mutemo wehukama weChannel 93 inonzi "LockIconInAddressBarEnabled" iyo inogona kushandiswa kugonesa ikoni yekukiya mubhawa rekero.
Izvo zvakakosha kuisa pfungwa pairi Google yakazivisa shanduko iyi kubvira 2018:
"Chrome inozobuda nekufamba kwenguva, kutanga nekubviswa kweiyo 'Yakachengeteka' tag uye neHTTPS scheme munaGunyana 2018 (Chrome 69)," akawedzera Emily Schechter weGoogle. Maitiro aya chikamu chekambani yekuyedza kuyedza kugadzira Chrome kero bar. Kwekupedzisira Kurume, Google yakazivisa kuti Chrome kero bar ichazoshandisa "https: //" nekutadza. Sekureva kwekambani, izvi zvinofanirwa kuvandudza zvakavanzika uye kurodha kumhanya kwemawebhusaiti anotsigira iyi protocol.
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti blog positi mwedzi wapfuura, Google yakashuma kuti iyo HTTPS-Yekutanga modhi ichawedzerwa kuChannel kudzivirira varwisi kubva pakubatisa kana kuteedzera padandemutande revashandisi:
“Kana bhurawuza yabatana nemawebhusaiti pamusoro peHTTPS, vasori nevanorwisa padandemutande havagone kudzora kana kugadzirisa chero dhata rakagovaniswa kuburikidza nekubatana ikoko (kusanganisira ruzivo rwemunhu kana peji yacho pachayo). Iyi nhanho yekuvanzika nekuchengeteka kwakakosha kune webhu ecosystem, ndosaka Chrome ichienderera mberi nekudyara kuita kuti HTTPS iwirirane, "akatsanangura..
Bhurawuza rinopa iyi modhi mu Chrome 94, HTTPS-Yekutanga Mode iyo ichaedza kukwidziridza rese peji reji kuHTTPS uye iratidze izere peji renyevero usati waisa masaiti asingatsigire. Google inotsanangura izvozvo
"Vashandisi vanogonesa iyi modhi vanogona kuva nechokwadi chekuti Chrome inovabatanidza kune masosi ari pamusoro peHTTPS pese pazvinogoneka uye kuti vanozoona yambiro vasati vabatana kune masosi pamusoro peHTTP.
"Kubva pamhinduro kubva kuecosystem, mune ramangwana isu tichaedza kugadzira HTTPS-Kutanga iyo default mode kune vese vashandisi. Mozilla zvakare yakagovana chinangwa chayo chekuita iyo HTTPS-chete modhi ramangwana rekutsvaga webhu muFirefox, ”kambani yakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome haicharatidze yakachengeteka webhusaiti zviratidzo